Tontolon’ny bilaogy Kenyana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2019 9:03 GMT
Bankelele manoratra ny karazana fiverenan'ny fifaninanana safari klasika afrikana atsinanana, izay tsy anisan'ny fifaninanana iraisam-pirenen'ny WRC intsony, saingy manolotra ‘toeram-pizahatany manintona sady mampanembona ary tsy manam-paharoa’.
Bullets and Honey manoratra momba ireo ‘mpanera izay mampiasa ny “isms” ho toy ny kalaza. Ao anatin'ny lahatsoratra, hadihadiany ny toetran'ny matanjaka sy izay mitarika azy ireo. “Heverina ho misy amin'ny fotoana rehetra ny fahefana amin'ny sarambabem-bahoaka raha mitazona izay mitranga amin'ny bozaka sy ny fandrian'ny fiainan'ny tantsaha ny trano eo amin'ny havoana. Tamin'ny famaliana ireo fanehoan-kevitra, manazava izy fa “… mety mahatsiaro ho misalasala fotsiny amin'ny hevitra mahazatra momba izany, ho manoritra ny fahalalana amin'ny fanjavozavoana ho mpiambina manohitra ny dogmatisma, indrindra indrindra ny fitompoan-teny fatratry ny “matanjaka”.
Gukira manana fifaninanana fanoharana momba ny akondro, miresaka ny marika ampiasain'ireo mpanohitra ny referandaoma momba ny lalàmpanorenana lany tany Kenya, ary mangataka amin'ny mpamaky azy mba hamorona izany.
Memoire mampahatsiahy ny fomba niovan'izany hoe “nihalehibe’ tany Kenya izany. Manomboka amin'ny fomba fitafy tamin'ny taona 80 miaraka amin'ny fehiloha sy zipo ho an'ny vehivavy, ary palitao sy pataloha miaraka ho an'ny lehilahy, ny fomba firesahana amin'ny ‘olon-dehibe’ sy ny fomba ankehitriny, “tsy mahay manavaka ny 18 taona amin'ny 25 taona tokoa ianao… “, ankoatra ny fandinihana hafa momba ny fiovan'ny toe-javatra amin'ny fandehanan'ny fotoana any Nairobi.
Miresaka momba ny fitomboana, manonofy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany i M amin'ny fanamarihana fa Volamena ny Antitra. (ny antitra no tena tsara)
Pandemonium Today manoratra ny fomba ahafahan'ny zavakanto manome karazana fampianarana izay tsy misy any amin'ny sekoly (mahazatra)?. Mahita izy fa: “Mitaky fanavaozana ny zavakanto, angamba mihoatra noho ny sehatra hafa rehetra. Na angamba ny zavakanto no mamela fepetra goavam-be amin'ny fisainana tia mamorona tsy voafehy.”
This and That mizara ny eritreriny mikasika ilay sarimihetsika The Constant Gardener. Momba ny kolikoly aseho ao amin'ny sarimihetsika, manamarika izy fa:
What makes it worse, is that the corrupt Kenyans don’t realise that they are being instrumentalised by the West against their own people
Ny tena mampaharatsy azy indrindra, dia tsy mahatsapa ireo Keniana mpanao kolikoly fa ataon'ny Tandrefana fitaovana hanoherana ny vahoakany manokana izy ireo
Cock and bull manoratra tantara mahaliana momba an'i Kaigutha, mpamatsy zava-pisotro mangingina kanefa malaza.